Booliska Puntland vs Gen Muxyadiin iyo Madaxtooyada -VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Booliska Puntland vs Gen Muxyadiin iyo Madaxtooyada -VIDEO
Booliska Puntland vs Gen Muxyadiin iyo Madaxtooyada -VIDEO
August 31, 2017 - By: HORSEED STAFF
Taliyaha Saldhigga Garoowe Dhamme Maxamuud Muuse Bile (Fardafuul)
Maantey oo Khamiis ah waxaa dib loogu soo celiyey xabsiga magaalada Garoowe dhalinyaro todobaad ka hor laga siidaayey halkaas, kuwaas oo sii deyntooda shaqada looga fariisiyey Taliyaha ciidanka Booliska Puntland Gen.Cabdulqaadir Faarax Ereg sida uu shir saxaafadeed ku sheegay kadib markii ay soo gaartey warqadda shaqada uu uga joojiyey Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, maadaama Madaxweynuhu ku maqan yahay Xajka.
Dhaliyarada dib loogu soo celiyey Saldhigga Garoowe ee saxaafadda loo soo bandhigay ayaa ah kuwo yar-yar, waxaana qaarkood dhigtaan Iskoolada magaalada, waxaa dhinaca ka fadhiyey waalidiintood iyo qaraabadoodi.
Taliyaha Saldhigga Garoowe Saddex xiddigle Maxamuud Muuse Bile (Fardafuul) oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay in amar luga siiyey in dib loo soo qabto dhaliyarada kadib markii kiiska la isku qabsadey, markii aan soo qabaney waxaan warbixintooda siiney Taliyaha la dagaalanka argagaxisada iyo mukhaadaraadka Gen. Muxyadiin Axmed Muuse, oo ahaa ninkii amrkii hore soo xiray caruurtan. Taliyaha saldhigga ayaa sheegay in aysan wakhti badan ku qaadan dib u soo celintooda, qaarna ay ka soo qabteen iskoolkii ay dhiganayeen, qaar kalena guryahoodi. DHamme Fardafuul ayaa sheegay in xorriyada qofku ay tahay wax weyn dadkuna aysan ahayn xoolo ee loo baahan yahay in denbiga ay galeen lagu soo dacweeyo.
Dhalinyaradan oo gaaraya 12 ayaa markii ugu horeysey ee Gen. Muxyadiin Axmed Muuse soo xiray uu ku eedeeyey in ay ahaayeen burcad habeenkii dadka booba, ma jirin wax qalab ah oo ay boobeen oo uu ku soo qabtey sida uu sheegay Taliyaha guud ee ciidanka Booliska Puntland Gen. Cabdulqaadir Ereg, sidoo kale ma jirin dad muddaci ku ahaa oo sheegaya in ay xoolo ka boobeen. Dhamme Fardafuul ayaa sheegay in Gen Muxyadiin uu faraha kula jiro shaqo aan tiisi ahayn, magaalada Khamro ayaa buuxisey, shaqada uu hadda hayaana waa tii Booliska gobolka Nugaal ayuu yiri.
Dhalinyaradan mar kale dib loo soo xiray ayaa dhibbane u noqdey siyaasiyiin iyo saraakiil awoodda iyo shaqadooda isku haysta, ma jiro denbi argagixiso ama mukhaadaraad ee lagu haysto, waxaana sii deyntooda iyo xarigoodu tusaale u noqdey awooda Gen. Muxyadiin iyo midda Booliska gobolka Nugaal iyo weliba taliyaha guud ee ciidanka Booliska Puntland, waxaana dhaliyaradu bartanka u galeen herdan awood iyo siyaasadeed.
Gen. Muxyadiin Axmed Muuse
Gen. Muxyadiin Axmed Muuse oo loo magacaabey laan ka tirsan Booliska oo ah la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka Puntland ayaa ka hawlgala magaalada Garoowe oo keliya, waxaana ay si weyn isugu dhaceen Taliyaha qaybta gobolka Nugaal Cabdirashiid Maxamed Cismaan oo u arka in shaqada uu hayaa ay tahay tii Booliska gobolka.
Waxaa la aaminsan yahay in Gen. Muxyadiin si toos ah uga amar qaata Madaxtooyada Garoowe, marka la tixraaco shir-saxaafaeedkii taliyaha ciidnaka Booliska ee Puntland Gen Ereg iyo sababta keentey in Madaxweyne ku-xigeenka Puntland soo dhex galo shaqadiisa. Gen. Muxyadiin wuxuu soo xiraa qofkasta oo Madaxtooyada laga amro iyada oo aan loo marin sharciga. Suxufiyiin dhawaan lagu xirey xabsiga Garoowe ayaa soo arkey dad muddo dheer iska xirnaa oo aan caddaaladda la horgeyn.
Shacabka Puntland ayaa si weyn u soo dhaweeyey sida xirfadda heerka sare ah ee Booliska Puntland ula dhaqmayaan shacabka, sida ay u dhawrayaan xeerka ciqaabta ee u deggan. Waxaa shacabku is weydiinayaa sababta dhaliyaradan loogu dul dagaalamayo?, waxa loogu soo oogi waayey denbiga ay galeen? sidoo kale waxa la is weydiinaya sababta Madaxtooyada iyo Gen. Muxyadiin ay ula wareegeen shaqadii ciidanka Booliska gobolka Nugaal? maxay u dhimi kartaa amniga gobolka nugaal?.
Taliyaha ciidanka Puntland Gen Ereg waxa uu Muxyadiin Axmed Muuse ku eedeeyey in uu faraha kula jiro shaqo aan tiisa ahayn, wuxuu sheegay in uusan isaga ka amar qaadan, sidoo kale waxa uu arrinta xariga dhalinyarada ku eedeeyey Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, labaduba kama hadlin eedenyta uga timid Taliyaha shaqada laga joojiyey.
Gen Muxyadiin Axmed Muuse waxa uu ka tirsan yahay ciidanka Booliska Puntland, horey waxa uu u soo noqdey Taliye ku-xigeenka ciidanka Puntland sanadkii 2015 ayaa xilka laga qaadey, waxaana taasi keentey in ciidamo uu wato uu la gadoodey, saldhigna ka dhigtey deegaanka Qarxis ee gobolka Nugaal, wadahadal kadib Gen. Muxyadiin waxa uu dib ugu laabtey Garoowe halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Hoos ka daawo shirka dhalinyarada lagu soo bandhigay